Degmooyinka oo lagu dhaliilay xaaladaha dhallaanka kelida ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Degmooyinka oo lagu dhaliilay xaaladaha dhallaanka kelida ah
La daabacay torsdag 30 mars 2017 kl 16.10
Stefan Holgersson (JO). sawir: Pernille Tofte
Baaris ay sameeysay hayadda magaceeda loo soo gaabiyo JO oo sheegtay iney caqabado ka jiraan meeleeynta dhallaanka keli-nimada dalka ku yimaada iyo sida ay waaxaha adeegga bulshadu daba-galka ugu sameeyso dar-yeelkooda caafimaad.
Sannadkii 2015 oo ey tiro aad u fara badan oo dhallaan keli-nimo ku socdaa ey dalka soo galeen ayuu howl-wadeenka JO ee lagu magacaabo Stefan Holgersson daba-gal ku sameeyey eedeeymaha laga soo sheegtay iyo habka ay waaxaha adeegga bulshadu u guteen hoowlahooda.
– Waaxaha adeegga bulshada ayaa gutey howlihii degdegga ahaa ee dhallaanka lagu qaabilaayey, middaasina oo ay ugu wacnayd kartidii howl-wadeennada iyo rabitaankoodii. Hase yeeshee marar badan waxaan jirin dhaqaalihii baaritaannada lagu sameeyn lahaa iyo sidii loogu heli lahaa goobo deegaan ee ku habboon dhallaanka, sida uu sheegay Stefan Holgersson.
Tira-badnidii dhallaanka dalka keli-nimada ku imanayey ayaa khasab kaga dhigtay howl-wadeennada waaxaha adeegyada bulshadu iney xoogga saaraan un sidii loo meeleeyn lahaa iyada oo aan laga eegeeyn maxaa dhallaanka u wanaag-san. Waxaa mararka qaarkood caddaatay in shirkadaha qaarkood aaney howlahoodu ahayn kuwo ey daacad ka yihiin.
Mid ka mid ah howlaha ugu muhiim-san waaxaha adeegyada bulshada ayaa ah iney daba-gal ku sameeyaan dar-yeelka caafimaad ee dhallaanka. Si haddaba middaa looga soo baxo ayaa loo baahan yahay xiriir joogto ah oo lala wadaago dhallaanka iyo booqashooyin lagu tago goobaha ey ku dhaqan yihiin. Baaritaanno la sameeyey qaarkood waxaa lagu ogaadey in aan xaaladaha qaarkood baaritaanno lagu sameeyn, qaarkoodna aanba loo sameeyn gacan-yare .
– Waa mid aan la qaadan karin in aanay degmo ka war hayan muddo intaa le’eg ka xaaladda dhallaan wakhti intaa le'eg ku meeleeysnaa, sida uu sheegay Stefan Holgersson.
Farqi ballaaran ayaa u dhexeeya baarista lagu sameeyo dar-yeelka caafimaad ee dhallaanka lagu meeleeyo degmada gudaheeda iyo kuwa ey degmadu ku meeleeyso goobo aad uga fog. Guud ahaan waxaa si dhab ah looga war-hayaa xaaladaha ey ku sugan yihiin dhallaanka lagu meeleeyo gudaha degmada gacanta ku haysa masuuliyadooda.
- Waayo-arag-nimada laga bartay xaaladdii cakirnayd ee soo-galootiga sannadkii 2015 ayaa ah iney mar walba ka wanaag-san tahay xaaladda dhallaanka lagu meeleeyo gudaha degmada gacanta ku heeysa ama goob aan ka fogeeyn ee lagala socon karo dar-yeelkooda caafimaad, sida uu hadalkiisa ku soo koobay howl-wadeenka JO Stefan Holgersson.